Indlu eqinile yamapulangwe, ingaphandle enhle futhi ehlelekile ngaphakathi - yini engcono? Kodwa ukuze uthole i-cottage ukuhlangabezana nalezi zidingo, kubalulekile ukukhetha ibhola elifanele noma ibha elifakiwe. Okungcono, ngisho nochwepheshe bangasho. Ubunzima ukuthi ekuqaleni okokudalwa kwenzakala kusukela kwento efanayo eluhlaza, futhi umehluko omkhulu ukhona ekuqhutshweni okuqhubekayo kwezinkuni. Yikuphi okungcono? Ake sizame ukuqonda.
Igoli evamile: kuyini?
Okokuqala, ake sibone ukuthi i-boram ejwayelekile yenzani nokuthi yenziwe ngani. Qaphela ukuthi noma yiluphi uhlobo lwalokhu lwakhiqizwa ezifweni ze-coniferous - i-spruce ne-pine. Abaningi ekwakhiweni bakhethe noma ibhambela ejwayelekile, noma ibha efihliwe. Okungcono, akubonisi, ngoba kubonakala sengathi empeleni kuyinto efanayo. Kodwa kukhona umehluko.
Izinto ezikhiqizwayo zivela emzimbeni owodwa we-humidity ephakeme, okungukuthi, izinkuni akuzona njalo ezomiswa. Siletha lo mthombo esisekelweni, sinqume ibe ibha futhi sathengisa ngokushesha. Ngakho-ke, ngaphansi kwezimo zokomiswa kwemvelo, lesi sihlahla siqala ukubola, ukuphazamiseka, ukuphahlazeka, njengoba ukomisa kwenzeka ngendlela engafanele. I-teknoloji yokukhiqiza ithatha ukubonwa okulula kuphela kwemiphetho kusuka kulog kusuka ezinhlangothini ezine.
I-nestrogen ayivame ukusetshenziswa ekwakhiweni kwezindawo zokuhlala zokusetshenziswa okuphakade. Ngokuvame ukwakhiwa kwendawo yasendlini kanye namaholide, isetshenziselwa ukwakha ama-balconi noma izingodo, ukubeka izingxenye - okungekho isidingo sokunakekela ubuhle bangaphandle.
Abaningi bayenqaba ukukhetha ibhamera efihliwe. Kungcono kube ngcono, ngokombono wabo, ngenxa yezindleko eziphansi zezinto ngokwazo, ukusatshalaliswa kwayo okubanzi kanye nezikhathi zokukhiqiza ezimfushane. Ngakolunye uhlangothi, kufanelekile ukuqonda ukuthi ngenxa yokuntuleka kokumisa kahle umuthi uzokoma, ngokufanele, isakhiwo ngokwawo singashubazeka. Kodwa uma uhlela ukwakha isikhungo esingekho yokuhlala noma isakhiwo sezomnotho, ibha evamile engenziwayo ilungile kulokhu.
Uma ukhetha ibhotela evamile noma ibha efihliwe, okungcono, akunakwenzeka njalo ukunquma. Uma ibha evamile ingelashwa nganoma iyiphi indlela, icala elifakiwe lihlukile kakhulu. Izinto ezinjalo zisebenza ngendlela efanele, lapho zithola khona isimo esithile, ubushelelezi. Kuyacaca ukuthi le ndaba izodla okungaphezulu, kodwa kuyisimo esiningi kakhulu futhi ukwakha kuso kulula kakhulu.
Umehluko wezinto ezifihliwe ngumhlanganisi wokukhiya, okuqinisekisa ukuhlanganiswa okukhulu kwezibhamu komunye nomunye. Iphrofayela ngokwayo ingahluka - i-multigranular noma i-Finnish, okungukuthi, ngezinhlamvu. Ukuvuna izinkuni zokukhiqiza kwenziwa ebusika, ngoba lolu hlobo lwamafutha aluhlaza luhlangabezana nezidingo zamandla nokuthembeka.
Ukuze ungabi nasisekelo futhi uqondisise, ibhakhodi egciniwe noma evamile ingcono, sikunikeza ithebula lesifinyeto kanye nezakhiwo eziyinhloko zobuchwepheshe nezokusebenza zalezi zinto ezimbili.
I-boriti cishe ayicubunguliwe, ngakho isakhiwo sokugcina sidinga ukuphela kwangaphandle nangaphakathi.
Ubuchwepheshe bokukhiqiza kuhilela ukunakekelwa kokuma kanye nosayizi, ngenxa yokuthi ifreyimu ihlanzekile.
Eco-friendly, kodwa ngenxa yokuntuleka kokuma kungadalulwa ku-fungus nokubunjwa.
Eco-friendly. Izinkuni zicutshungulwa izindlela zokuzivikela esiteji sokukhiqiza.
Ibha evamile ayicacile, ngakho-ke ukulungiswa okucophelela nokufudumala okunye komqhele kuyadingeka.
Ibha efihliwe inezilinganiso ezicacile nesistimu yokukhiya yokuxhuma. Lokhu kuqinisekisa ukuqina kwamalungu.
I-Shrinkage iphakeme ngenxa yokuntuleka kokufakelwa nokuma.
Ngakho, ngokushesha kucacisa ukuthi yini ehlukanisa ibha evamile noma ibha efihliwe. Yikuphi okungcono? Kukawe. Kodwa khumbula ukuthi ukwakhiwa akukwazi ukulondolozwa, ngoba noma yikuphi ukugcinwa kuyothinta ukusebenza okuqhubekayo kwendawo yokuhlala.
Izici zezinto zokugcoba ezivuthayo
Izinkuni yizinto ezifanelekayo zokwakha. Futhi kaningi kwakusetshenziswa izinhlobo zayo - ibhontshisi efihliwe noma ehlanganisiwe. Okokuqala kulungile ngoba kuye kwacaca ubujamo bejometri nobukhulu, kuhlanzwa kuzo zonke iziphambeko, kunesistimu yokukhiya yokuxhumana. Kodwa kukhona enye i-beam ehlanganiswe ngomusa. Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwezindlu zasemakhaya, naphezu kwezindleko eziphezulu. Indlela ongakhetha ngayo - ibhontshisi eqoqwe noma ibhontshisi efihliwe? Yikuphi okungcono? Ukuze siqonde umehluko, ake sikhulume ngezinombolo zezici zamuva.
Amapulangwe ahlanganisiwe akhiqizwa yi-sawing softwood e-lamellas, ekhonjiswe ukuze ibusheleleke, bese igxila usebenzisa i-glue ekhethekile. Kuyinto enobungane futhi engenabungozi. Ngemuva kwalokho, le ndaba isekelwe ukwomiswa nokuphindaphinda kabusha, bese kufakwa ngaphansi komshini. Ukuze uqonde ukuthi iyiphi ibha engcono - ifakwe noma ifakiwe, sinikeza elinye ithebula lesifinyeto.
Iqoqwe noma iqine?
Ukubukeka okuhle, ikakhulukazi ekugcineni kancane.
Izindlu ezivela emigodini ekhonjiwe zibukeka zic futhi azidingi ukugoba kwangaphandle.
Isikhathi sokuqoqa indlu ngamasonto angu-2-3.
Igama lokuhlanganisa indlu liviki.
I-shrinkage ayincane, ukuphahla kungavela.
Akukho shrinkage ngenxa yobuchwepheshe bokukhiqiza.
Ukuvezwa okuphezulu lapho kungekho khona ukucubungula okufike ngesikhathi.
Okuphansi ngenxa yezinga eliphezulu lokuma.
Izinga eliphakeme, naphezu kokusetshenziswa kweglue ngenkathi igluing lamellas.
Ibha efihliwe, ikakhulukazi umswakama wemvelo, ayithengi. Kodwa izindleko zokuqeda kwangaphandle kwezinto ziyadingeka.
Igoli elihlanganisiwe libiza, kodwa asikho isidingo sokuqedwa kwangaphandle kwangaphandle.
Ingena noma i-beam?
Izindlela zokwakhiwa kwezindlu zaseRussia zisekelwe ekusebenziseni izinkuni njengezinto eziyinhloko. Ngakho-ke, abantu abaningi banombuzo ozwakalayo: "Yini engcono - ibhokisi eliyindilinga noma ibha elifakiwe?" Sitshele kakade ngemininingwane efihliwe, manje sizobe sisho okuncane mayelana nendaba yesibili.
I-log eyindilinga ikhiqizwa ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile okwenza ubukhulu bezinto ezikude ubude bufane. Amangqamuzana ahlanganiswa nezintambo ezikhethekile eziphakathi kwe-grooved, eziqinisekisa ijubane lomhlangano welogi. Kuye ngezimo zezulu lapho indlu yelogi izoqhutshwa khona, logi ngokwalo lingase libe nobubanzi obuhlukile - kusuka ku-10 ukuya ku-16 cm.
Kokubili ibha efihliwe kanye nelogi elizungezile ngokuyisisekelo kufana nokuthungwa okufanayo futhi kuhlangabezane nezidingo zobungane bezemvelo, ngakho akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi ukuqonda ukuthi ukhetha i-boram noma i-log efihliwe. Yikuphi okungcono? Ukuqonda lokhu, siphakamisa itafula.
Akudingekile ngenxa yehlanganiso eziqinile zezibhamu omunye nomunye.
Kudinga i-caulking ye-grooves, futhi iphindwe.
Ukusikeka okufakiwe kungavikela isakhiwo kusuka emswakeni, kanye nezinkuni - kusuka ku-fungus.
Ngenxa yefomu lezinhlamvu, umswakama ungakwazi ukuqoqa phakathi komqhele.
Sikhombise kuphela lezo zimpawu ezingezansi umahluko phakathi kwezinhlobo zezinkuni. Lezi zinto zokwakha zithandwa kakhulu ngenxa yobungane bayo bemvelo, lula ukufakwa. Yini ongayikhetha? Qhubeka nokucabangisisa kwakho siqu nokuhlelwa kwezimali. Kodwa khumbula: isihlahla siyinto ekhohlisayo edinga ukucubungulwa ngesikhathi ukuvikela izimbangi zangaphandle.